Home https://isimbido.tv/how-does-online-casino-gambling-work/ acorn casino
Otu onye isi ochichi nke ndi isi ochichi na APC kwuru na o juru ya anya na ndi ochichi Gọọmenti Samuel Ortom gbaghaara ndi PDP.
Onye ode akwukwo akwukwo bu onye isi akwukwo bu Bolaji Abdullah kwuru, sị: “Gọọmenti hapụrụ nzukọ ahụ na-ekwu na afọ juru ya na nkwenye ndị isi nyere. Anyị ka na-arụ ọrụ na-emetụta mkpebi ndị sitere na nzukọ ahụ. Ya mere, gọọmentị Ortom nwere ihe ijuanya.
“Ndị otu a na-ekwuputa ọkwa mbụ ya na ọ na-akwanyere ikike nke nwa amaala ọbụla aka ịhọrọ òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha kama na-egosipụta olileanya na ndị hapụrụ nnọkọ ahụ ga-ebido mkpebi ha.
“Ọbụna na mmepe a, anyị echeghị na ọ bụ oge na-aga maka imekọrịta. Anyị ga-anọgide na-ekwurịta okwu.
Ọ bụrụhaala na ndị mmadụ na-emeghe uche ha ma nwe obi ike iji tinye ihe ndị dị adị na tebụl, enwere ike ime ka mmekọrịta dị mma.
“Anyị na-akpọku ndị òtù gafee mba ahụ ọzọ ka ha nọrọ jụụ ka onye nduzi nke ndị isi na-aga n’ihu na-arụsi ọrụ ike iji dozie nnọkọ ahụ maka ntuli aka n’ozuzu ọzọ.”
Nnukwu nnupụisi na Mgbakọ Mba dị na Tuesday mere ka otu ndị nnọchiteanya iri na anọ na ndị isi nke iri abụọ na asaa nke Ụlọikpe Nnọchiteanya.
N’ihe yiri ka ọ na-achọsi ike ịkwụsị nnupụisi ahụ, a kọrọ na President Muhammadu Buhari nwere nnọkọ n’abalị ikpeazụ na ndị nnọchiteanya nile nke APC.
Okpukpo ugwo n’izu gara aga ekwuola na APC nyere ya “uhie uhie”, na-agwa onyeisi oche nke otu onye isi ochichi Adams Oshiomhole ka o soro onye ochichi n’udo.
Ma mgbe ọ hapụrụ ụlọ gọọmentị maka Abuja ụnyaahụ ka ọ sọpụrụ ụkwụ ọzọ nke udo parley, ọtụtụ narị ndị ntorobịa na-ebu ọkwa na-egbochi ndị na-eto eto na-ekwusi ike na ya na ndị na-achị achị.
Ndi ntorobia, nke otu Dave Ogbole dughaara, boro onye ochichi agha ka o biarue ozi ma obu buo ha.
Ha chere na ọ bụrụ na ọ gaa nzukọ ahụ, a ga-emeri ya na nhoputa ndi ochichi niile.
Ihe ndi mmadu choro maka akwukwo na nkwa iji chee echiche banyere ihe ndi ha choro ka ha bu. Ọ kwadoro, tụgharia ma laghachi na isi. Esisịt ini ke enye ama eketịn̄, enye ama ọdọhọ ke imọ idiọkn̄kpọ
Mgbe ya na ndi isi oche ochichi obodo 13 na ndi isi ochichi 276 no na Makurdi kwadoro, o kwuru, sị: “Akwụsịla m APC ka ọ bụrụ PDP ma nyefee m akwụkwọ ozi m nyere onyeisi oche nke ndị uwe ojii m.
Onye isi oche na ndị isi ndị uwe ojii m nọ na-egosipụtakwa na ha nwere mmasị iso m gaa oriri ọhụrụ m. Adị m obere ịla ezumike nká.
“Anọ m na PDP ma achọpụtara m na enweghị nchebe m. Ọ bụ ya mere m ji hapụ oriri ahụ.
Ugbu a, m nọ na APC ma achọpụta m na m nwere mmasị na nke ndị m anaghị echebe na APC. A na-ejide ihe oriri ahụ ma na-apụnara mmadụ otu onye na-eme omume dị ka onye ọchịchị aka ike.\_
“Ma ugbua na ndi isi ochichi weghachitere ya na otutu mgbanwe di iche iche na-aga n’ihu iji jide n’aka na enwere ezi uche nke ochichi onye kwuo uche ya, echere m na oburu na m alaghachi n’ememe m ga enwe ike itinye ndi mmadu uru.
Echere m ka mụ na ndị ọzọ na-agba ọsọ na-agba izu, ọtụtụ n’ime ha bụ ụmụnne m.
Enweghị m nsogbu na ha na-eguzogide nloghachi m na-abịaghachi na nnọkọ ahụ. Ka ndị ọzọ meriri. Echere m na anyị dị ike. ”
Ochichi nke ozo choro ya na mmegide a megidere ya n’agbanyeghi otu ulo nke APC ga-eme ka udo di n’etiti ya na ndi otu ozo na steeti.
O wutere ya mgbe ndi mmadu kwuputara ya na ndi mmadu kwadoro ya maka okwu nke abuo n’oge nzuko omeiwu nke steeti.
“Ọ bụ m nyere ha ndụmọdụ ka ha kwe ka ndị ọzọ soro m gọọmenti, na-agbaso ọchịchị nke onye kwuo uche ya.
Ha kwuru na ha kwadoro m n’ihi na m na-akwụ ụgwọ.
M na-eche ihe mere ndị mmadụ ji na-akatọ m nchịkwa. ”
N’okwu ndị dị iche, onye isi nke nzukọ ndị ndụmọdụ, Tom Hanmaikyur na onyeisi oche, Association nke Gọọmenti Obodo nke Nigeria (ALGON), Anthony Shawon, kwere nkwa maka ndị ọrụ ha ka ha soro gọvanọ ọ bụla ọ chọrọ.
Ha kwekwara nkwa na ha ga-akwado mmezi nke nrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya.
Deputy Senate President Ike Ekweremadu ka emeela ka otu n’ime ihe ndi mere tupu onodi nzuko uka nke Tuesday.
A kpọrọ ya ka ọ bịa n’ọfịs nke Commission Economic Crime na Financial Crime maka ịjụ ajụjụ gbasara ebubo ebubo.
“Ekwetara m ịgbaso ha ma ha achọghị ịnụ ka m zaa òkù ahụ,” ka ọ gwara ndị nta akụkọ.
Dị ka ya si kwuo, ihe ahụ bụ ihe na-egbochi ya ka ọ ghara ịbụ onyeisi oche nke mgbagha a na-atụ anya ya.
A kwụsịkwara onyeisi oche Senate Bukola Saraki ịkwanyere òkù ndị uweojii ùgwù kama o gbochiri izere mgbochi.
Ọ kọwara ihe ahụ merenụ dị ka “ịdaba na ọchịchị onye kwuo uche anyị” na “mmepe dị ize ndụ”.
Nakwa, ndị PDP na Social Democratic Party (SDP) na-akatọ ndị ọchịchị APC ugbu a, na-ekwu na Buhari bụ onye iro na-emekarị ka a ghara ịkọcha ya na 2019.
Onye ọnụ na-ekwuchitere SDP, bụ Princess Goldba Tolofari, gwara onye nnọchiteanya PDP ya bụ Kola Ologbondiyan mgbe ọ gara nleta nleta: “Ha (APC) abụghị ndị ọchịchị.
Ọ bụ ya mere ihe ndị na-arịwanye elu ma anyị enweghị ike ile anya ma hụ ihe na-aga n’ụzọ ha. ”
Ologbodinyan kwuru na ozi ahụ iji zọpụta Nigeria agaala. Ọ nabatara Ọtọdọks na ndị PDP ma gbaa ndị ọzọ ume ka ha gbasoro ya.